Ma-huraan: Maanso baroor-diiq ah
You are here: Home Home Ma-huraan: Maanso baroor-diiq ah
Waa maanso baroor-diiq ah oo aan ku sii gelbinayo Maxamed Xaashi Dhamac oo loo yaqaannay Gaarriye oo 1dii Bishan Oktoobar ku geeriyooday dalkaa Norway oo uu muddo sannad ah jiifay. Saaxiibbo qoys ayaanu ahayn. Suugaan-wadaag ayaanu ahayn. Fan-wadaag ayaanu ahayn. Halgan-wadaag ayaanu ahayn. Wuxu ahaa nin aanu waayaha wada dhandhamin jirnay oo aanu waxyaabo badan aragti ahaan ka mideysnayn.